Filoha Rajoelina tany amin’ny UA: “Nampivaingana ny safidiny hanovana ny tantara ny Malagasy” | NewsMada
Filoha Rajoelina tany amin’ny UA: “Nampivaingana ny safidiny hanovana ny tantara ny Malagasy”
“Tonga amin’ny tanjona hanapahany hevitra i Madagasikara, indrindra amin’ny fibanjinana ny hoaviny rehefa nandalo ny fifandimbiasam-pahefana demokratika milamina.” Anjara fitenenan’ny filoha Rajoelina Andry, nitarika ny degelesiona malagasy tamin’ny fanombohana ny Fihaonana an-tampony faha-32 ataon’ny Vondrona Afrikanina (UA) any Addis Abeba, Etiopia, omaly, io.
Ankehitriny, nametraka fitokisana aminy ny vahoaka malagasy. Tsy hoe nifidy tanora mitarika fotsiny, fa nisafidy indrindra koa ny vina, ny tetikasa, ny fandaharanasa hanova amin’ny fifanarahana miaraka ny vahoaka manontolo mba hanonerana ny fahatarana amin’ny fandrosoan’i Madagasikara. Nampivaingana ny safidiny ho amin’ny fanovana ny lalan’ny tantara ny Nosy ny Malagasy.
Ankehitriny, ankatoky ny faha-60 taon’ny Fahaleovantena, manao tomban’ezaka i Madagasikara. Mahasanganehana izay jery todika izay amin’ny fahitana ny fahantrana sy ny fiankinan-doha amin’izay iainana.
Mila miova i Afrika
Eo amin’ny kihon-dalan’ny tantara politika sy toekarena ary sosialy, mahalala ny tokony handraisany indray ny toerana eo anivon’ny kaontinanta afrikanina i Madagasikara, ary hamaky bantsilana ny fahavoazana mahazo an’i Afrika: tokony hanankarena, nefa mahantra. Azo heverina ho ara-dalàna ve, ohatra, raha avy aty Afrika ny 50 % ny volamena eran-tany, nefa tsy manana tahirim-bolamena akory na iray aza?
“Ankehitriny, raha te hametraka Afrika vaovao ho an’ny taranaka isika, isika rehetra izay tonga eto ato amin’ity efitrano ity no mirotsaka ho amin’ny fanovana ny lalan’ny tantara sy ny fiainan’ny mpiray firenena amintsika“, hoy izy. Miankina amintsika ny hoavy ary eo an-tsorotsika. Tsy hijanona ho kaontinanta mahantra i Afrika. Mila manova ny sarin’i Afrika isika, ary hanao azy ho kaontinanta mahomby sy mandroso. Manana ny loharanon-karena sy ny angovo hanatanterahana izany isika.
Fandraisana anjara fitenenana voalohany iny…
“Mpitsoa-ponenana, mpifindra monina: firosoana mankany amina vahaolana maharitra ho an’ireo mifindra lasy an-tery aty Afrika”. Izay ny lohahevitry izao Fihaonana an-tampon’ny UA izao. Io tany Addis-Abeba ity no fitsidihana iraisam-pirenena voalohany nataon’ny filoha Rajoelina Andry, taorian’ny fianianany, ny 19 janoary lasa teo. Io koa no fandraisany anjara voalohany amin’ny fivoriamben’ny UA. Izay no nahazoany anjara fitenenana manokana tamin’ny lanonam-panombohana, omaly, io. Rahampitso no hitodi-doha aty an-tanindrazana ny delegasiona malagasy.